IMasia Ca La Rosa (7-8 abantu) - I-Airbnb
IMasia Ca La Rosa (7-8 abantu)
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguJosep Àngel
UJosep Àngel yi-Superhost
I-Les Casetes del Congost Vilatge Resort Barcelona, us ofreix le fama yenkulungwane yeshumi elinesixhenxe ibuyiselwe i-molt acuradament, iyinxalenye yeLifa leMveli le-Architectural yeTagamanent i Catalunya, ibekwe kwicala elingasempuma leMontseny kwixesha likamasipala laseTagamamanent.
Masia enemigangatho emibini, kunye 3 amagumbi okulala amabini, 1 eyongezelelweyo kunye negumbi kabini efakiweyo yangaphandle, 2 zokuhlambela exhotyiswe, Indoor Jacuzzi, Sauna Finnish, Llar de Foc, ikhitshi exhotyiswe ngokupheleleyo, Barbecue, igadi Private, Iqubha ekwabelwana ngayo.
4.81 · Izimvo eziyi-37
Le ndawo yokuhlala iboniswa kwabo bantu babhabha kunxweme lwesixeko esikhulu (le yi-35Km ukusuka kwikomkhulu laseCatalan "Barcelona"), kwaye kunokubakho uhambo olukhawulezayo nge-l'entorn okanye ubalekela eCosta Brava, eCosta de Barcelona okanye Yiba al'alta muntanya, le yindawo yobuchule, intsimbi mig de Catalunya, idityaniswe kakuhle yi C-17, C-25 kunye AP-7. Uhambo olusinyanzelo lolo lweTuró de Tagamanent kwi-gaudireu d'a imbonakalo eyodwa yepanoramic yalo lonke ithafa laseVallès kunye ne-Osona kunye notyelelo lwasePous de Glaç més ben conservats d'Europa ukuya eveïnatge d'Avencó, nakwiTagamanent. Kwingingqi ye-n'hi kukho ihlabathi leziganeko ze-assenyalats ezinezithuthuthu okanye iikhosi zemoto kwi-Circuit de Catalunya, izifundo zeentaba kunye neziganeko zenkcubeko yonke i-l'any.
Umbuki zindwendwe ngu- Josep Àngel
Zijonge iiyure ezingama-24 onazo
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Tagamanent